Lalàm-panorenan’ ny kardinaly Tsarahazana Désiré : “Tokony hifanaraka ny teny aloaky ny vava sy ataon’ny tena” | NewsMada
Lalàm-panorenan’ ny kardinaly Tsarahazana Désiré : “Tokony hifanaraka ny teny aloaky ny vava sy ataon’ny tena”
Nisy ny lamesa voalohany nataon’ny kardinaly Tsarahazana Désiré tany Toamasina, omaly. Hafany amin’ny lalàm-panoreneny hoe “Tokony hifanaraka ny teny aloaky ny vava sy ataon’ny tena“
Toy ny efa mahazatra azy eo amin’ny fasahiana miteny ny marina, namapatrapatraka tsara tamin’ny lahateniny ho an’ny mpitondra sy izay mihevitra hitondra firenena ny kardinaly Tsarahazana Désire, nandritra ny fitarihany ny sorona masina lehibe, teny amin’ny kianja’ny Lycée katolika, Stelat Maris, Tanamborozano, omaly. Tokony hifanaraka ny teny aloaky ny vava sy ataon’ny tena; raha tsy izay, mpandainga. Mila mibebaka isika rehetra; raha tsy izay, tsy hatanty ny filazana ny marina ary tsy afa-kiatrika ny fahamarinana sy rariny ary ny marina, raha ny nambarany.
Saika maneran-tany ny ratsy vokatry ny fitiavan-tena, ny fitiavan-dratsy, ny fampiasana herisetra ary ny fividianana ny marina sy rariny hampanjakana ny kolikoly. Ampiasaina eto
amintsika ny fandaniana andro ny vahoaka amin’ny fiveremberenana any amin’ny birao, raha misy taratasy karakaraina raha tsy manolotra vola kely. Noho ireo, mila miova fomba fisainana isika Malagasy, sao ho lasa fanao ny kolikoly.
“Hafatro aminareo, tiavo ny marina tiavo i Kristy”, hoy ny kardinaly. Raha milaza fa kristianina ianao, manompoa ny vahoakanao. Raha tsy manompo ny vahoakanao ianao, mandainga amin’Andriamanitra. Koa aza mijery ny lohasaha mangina fa ao Andriamanitra an-tampon’ny loha ary raiso ho lalàm-panorenena mifehy anao raha vao mihevitra ny hanao ratsy sy zavatra tsy milamina amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka madinika, vakio ny Rom 12: 21, “Aza manaiky resin’ny ratsy fa reseo amin’ny soa ny ratsy”.
Namoan-tsampona indray ny arofenitry ny filoham-pirenena
Henatra tsy roa aman-tany indray indray niseho tamin’ny filoha Rajaonarimampianina, omaly io, raha hihazo ny toerana hanaovana ny lamesa izy sy ny delegasiony fa nivantana tao amin’ny trano fiangonan’ny FJKM, Manareza vavahady etsy Tanamborozano. Vokany, akory ny hatairan’ny kristianina tao amin’ny fiangonana nahita ny rodorodon’ny mpiambina sy mpiandraikitra ny arofenitra, ka nahatonga ny tao amin’ny FJKM fa ery aloha ery no misy ny lycee Stela Maris halehan’izy ireo.
Manaraka izany, tsy toy ny fahatongavana filoha ny fandraisan’ny kristianina azy,
raha nifanohitra tamin’ izay ny fandraisan’ny rehetra ny filohan’ny Tetezamita teo aloha: nahazo tehaka sy fihobiana. Tsy mahafehy ny mahaha mpiaro ny arofenitra azy ireo
miandraikitra an’ izany nandritra ny roa andro nandalovan’ny filoha Ranjaonarimampianina teto Toamasina.